Abamuru nke Iji Mbadamba ụrọ nke Ahịa Systems In-Store | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 29, 2015 Douglas Karr
Mgbe ụlọ ahịa na-ere ahịa na-eche banyere otu mbadamba ire ere, ha nwere ike na-eche naanị maka onye ọzọ maka POS dị egwu nke ha zụrụ afọ iri gara aga. Ọ dị mkpa iburu n'uche na mbadamba POS anaghị edozi nsogbu nke ngwaike ngwaike, ọ bụkwa ngwa ọrụ dịgasị iche iche nke nwere ike melite ahụmịhe ịzụ ahịa nke ndị ahịa.
Ebumnuche ekwenti nke ụlọ ọrụ ihe ngwanrọ na ngwanrọ sọftụwia bụ $ 2 ijeri na 2013 - naanị na North America. Na 70% nke ndị na-ere ahịa na-atụle usoro POS mbadamba n'ihi na nha ihu nha ha, ịdị mfe nke iji na ihe ndị ọzọ.
Mbadamba ụrọ POS abụghị naanị maka ịlele - enwere ike iji ha maka ọrụ dịgasị iche iche:
Nhazi ịkwụ ụgwọ ebe ọ bụla n'ime ụlọ ahịa ahụ, na-ewepụ ahịrị ndenye ọpụpụ.
Nhazi ịkwụ ụgwọ ebe ọ bụla na-abụghị ụlọ ahịa ahụ, na ihe omume na ebe mgbakọ.
Nhazi ga-alaghachi mfe na mfe ebe ọ bụla na ụlọ ahịa.
Nlepụta ngwa ahịa na ịnye ọnụahịa n'ime ụlọ ahịa ahụ maka ndị na-azụ ahịa.
Mmemme iguzosi ike n'ihe nweta ebe obula, oge obula.
Mmekọrịta Ecommerce na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Onye ahịa gị nwere ike ịmalite ire n'ụlọ, ma bulie ya na ụlọ ahịa mkpọsa.
Dị ka anyị kwurula na post gara aga, ime ka usoro ahịa a dị mfe ma na-atọkwu ndị ahịa gị ụtọ ga-abawanye ahịa. Mbadamba ụrọ POS usoro bụ isi na atụmatụ a.
Tags: urubluepayebe ahịanaambadamba nkume nke irembadamba pos
Digital Content Production: Gịnị bụ Ọgwụgwụ Ngwaahịa?
Dec 21, 2017 na 6:10 PM
M na-eji livepos n'ụlọ ahịa m, ọ na - enye aka na arụ ọrụ anyị kwa ụbọchị. Ọ na-eme ka ọrụ anyị dị mfe ma na-echekwa ọtụtụ oge anyị.
Feb 1, 2018 na 5:34 PM
Anyị na-eji ndụ afọ ole na ole ugbu a na atụmatụ ha nyere aka mee ka ọrụ anyị dị mfe. Ọ baara anyị ezigbo uru.